musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » IATA: European Commission Kubuda Mukubata Neicho Chaicho
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
European Commission yakanga yaregeredza kuraira uye humbowo hwakapihwa nenyika dzenhengo dzeEU uye indasitiri yendege.
European Commission inotora danho rekumisikidza chando slot kushandisa chikumbaridzo pa50%.
Vanotonga muUK, China, Latin America neAsia-Pacific vaisa zviyero zvakati wandei munzvimbo.
Commission yaive nechinangwa chakavhurika chekushandisa mirawu yekusimudzira kusimudzira kudzora kwendege, asi vakapotsa.
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) vakapiwa zita European Commission's (EC) danho rekumisa nguva yechando yekushandisa mugove pa50% se "kunze kwekubata neicho chaicho," uye akataura kuti EC yakanga yarega zano uye humbowo hwakapihwa nenhengo dzenhengo dzeEU uye indasitiri yendege, iyo yakanga yaita kuti nyaya yacho ive yakaderera chikumbaridzo.
Chiziviso cheEC chinoreva kuti, kubva munaNovember kusvika Kubvumbi, ndege dzinoshanda panhandare dzinodzorwa-nhanho dzinofanira kushandisa kanenge hafu yezvikamu zvese zvakateedzana zvemitambo. Iko hakuna kurerutswa kwekudzosera kumashure masiketi pakutanga kwemwaka achibvumira ndege kuti dzienzane nehurongwa hwadzo kune chaicho chinodikanwa kana kugonesa vamwe vatakuri kuti vashande. Pamusoro pezvo, mutemo we'kumanikidza majeure ', uyo mutemo wekubhejera unomitiswa kana mamiriro akasarudzika ane chekuita nedenda re COVID aripo, akadzimwa kuitira mukati meE-EU mashandiro.
Mhedzisiro yeshanduko idzi ichave yekudzora kugona kwendege kushanda pamwe nekukurumidza kunodiwa kupindura kusingafungidzirwe uye nekukurumidza kuchinja kudiwa, zvichitungamira mukuparadza nharaunda uye zvisina basa nendege. Izvo zvakare zvichawedzera kudzikamisa kugadzikana kwezvemari kweindasitiri uye kutadzisa kupora kweyepasi rese kutakura mweya netiweki.
“Zvakare Komisheni yaratidza kuti havachina chokwadi. Indasitiri yendege ichiri kutarisana nedambudziko rakaipisisa munhoroondo yayo. Commission yaive nechinangwa chakavhurika chekushandisa mirawu yekusimudzira kusimudzira kudzora kwendege, asi vakapotsa. Pane kudaro, varatidza kusaremekedza indasitiri, uye nenhengo zhinji dzinogara dzichikurudzira mhinduro, nekuomesa musoro kutevedzera gwara rinopesana neuchapupu hwese hwavakapihwa, ”akadaro. Willie Walsh, Director General weIATA.
Nharo yeKomisheni ndeyekuti intra-EU traffic yekudzoka muzhizha ino yakaratidza 50% yekushandisa chikumbaridzo pasina kurerutsa. Izvi zvinobhururuka zvakatarisana nehumwe humbowo hwakakosha hwekusajeka kwemabatiro emigwagwa munguva ino yechando, yakapihwa nenyika dzinokosha dzenhengo dzeEU pamwe neIATA nenhengo dzayo.